Ny Soratra Masina - Fandikan-Tenin'ny Tontolo Vaovao - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Baibolin'ny Vavolombelon'i Jehovah)
Ny Soratra Masina - Fandikan-Tenin'ny Tontolo Vaovao no anaran'ny Baibolin'ny Vavolombelon'i Jehovah amin'ny fiteny malagasy. Nandikana ny andian-teny anglisy hoe New World Translation of the Holy Scriptures izany. Atao hoe "Soratra Hebreo sy Aramianina" ny Testamenta Taloha fa "Soratra Grika Kristianina" kosa ny Testamenta Vaovao.
Ny Testamenta Vaovao amin'ny teny anglisy dia vita tamin'ny taona 1950, ary ny Baiboly manontolo dia vita tamin'ny taona 1961. Nampiasain'ny Vavolombelon'i Jehovah sy nozarainy izany. Io no dikan-teny voalohany nataon'ny Vavolombelon'i Jehovah avy amin'ny teny fototra, dia ny fiteny hebreo sy aramianina ary grika. Tamin'ny taona 2018 dia nahatonta Baiboly miisa mihoatra ny 227 000 000 manontolo na amin'ny ampahany ny Watch Tower Society tamin'ny fiteny miisa 185.
Araka ny tenin'ireo mpanonta ny Baiboly dia natao ny fandikan-teny vaovao satria nampiasa teny antitra ny ankamaroan'ny Baiboly nampiasaina hatramin'izay, hatramin'ny Authorized Version (King James). Araka azy ireo ihany dia ny fahitana soratanam-piraketana tsaratsara kokoa dia nahafahana namantatra ny tian'ny mpanoratra ho lazaina, indrindra amin'ireo andalana tsy mazava. Ireo mpahay teny ankehitriny dia mahalala tsara kokoa ny endriky ny fiteny hebreo sy ny an'ny fiteny grika fototra raha ampitahaina amin'ny taloha .
Ny Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania no namoaka azy izay natao pirinty tany Japana tamin'ny taona 2009. Efa nivoaka tamin'ny taona 2003 ny Soratra Grika Kristianina (izany hoe ny Testamenta Vaovao) nefa nohavaozina indray ny dikan-teny tamin'io fanontana farany io. Tsy nadika mivantana avy amin'ny teny fototra (hebreo sy aramianina ary grika) ny Baibolin'ny Vavolombelon'i Jehovah amin'ny teny malagasy fa nadika avy amin'ny dikan-teny anglisy, izany hoe avy amin'ny New World Translation of the Holy Scriptures.
Nandray ny kanonan' ny Baiboly protestanta ny Baibolin'ny Vavolombelon'i Jehovah ka tsy ahitana ireo atao hoe Boky apokrifa (na Deoterokanonika katolika na ortodoksa) ny ao anatiny. Noho izany dia miisa 66 ny boky ao anatiny.
Ahitana boky 39 ny ao amin'ny Soratra Hebro sy Aramianina, dia ireto avy ny anarany: Genesisy, Eksodosy, Levitikosy, Nomery, Deoteronomia, Josoa, Mpitsara, Rota voalohany, Samoela voalohany, Samoela voalohany, Mpanjaka voalohany, Mpanjaka faharoa, Tantara voalohany, Tantara faharoa, Ezra, Nehemia, Estera, Joba, Salamo, Ohabolana, Mpitoriteny, Tononkiran’i Solomona, Isaia, Jeremia, Fitomaniana, Ezekiela, Daniela, Hosea, Joela, Amosa, Obadia, Jona, Mika, Nahoma, Habakoka, Zefania, Hagay, Zakaria ary Malakia.
Ahitana boky 27 kosa ny ao amin'ny Soratra Grika Kristianina, dia ireto avy ny anarany: Matio, Marka, Lioka, Jaona, Asan’ny Apostoly, Romanina, Korintianina voalohany, Korintianina faharoa, Galatianina, Efesianina, Filipianina, Kolosianina, Tesalonianina voalohany, Tesalonianina faharoa, Timoty voalohany, Timoty, Titosy, Filemona, Hebreo, Jakoba, Petera voalohany, Petera faharoa, Jaona voalohany, Jaona faharoa, Jaona fahatelo, Joda ary Apokalypsy.
Be mpanakiana ny fomba nandikana ny Baibolin'ny Vavolombelon'i Jehovah, ny dikan-teny anglisy izany izay mahazo koa ny dikan-teny hafa rehetra, ka isan'izany ny dikan-teny malagasy. Ny lehibe amin'ny tsikera dia io Baiboly io heverin'ny mpitsikera azy fa nanaisotra na nanova ireo teny na rafi-pehezanteny mety mifanohitra amin'ny fivoasan'ny Vavolombelon'i Jehovah ny Soratra Masina. Isan'izany ny andalana mety hanambara ny maha Andriamanitra an'i Jesosy ka mety hanamarina ny Trinite.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Ny_Soratra_Masina_-_Fandikan-Tenin%27ny_Tontolo_Vaovao&oldid=980204"
Dernière modification le 27 Janoary 2020, à 19:26
Voaova farany tamin'ny 27 Janoary 2020 amin'ny 19:26 ity pejy ity.